Last updated on October 20th, 2020 at 04:30 pm
Ngazviende Dance Challenge: Record Yourself Dancing Like President Mnangagwa And Win Big
Zimbabwe is gearing up to commemorate the Anti-Sanctions Day scheduled for October 25 and Zanu PF has taken the advantage of the dance challenge craze that has hit Zimbabweans following Jerusalema and John Vuli Gate recently.
Zanu PF has launched a dance challenge of its own that is meant to make Zimbabweans unite against sanctions. The party is offering Zimbabweans fabulous prizes for participating in the Ngazviende Dance Challenge.
The dance challenge is meant to advocate for the removal of sanctions as Zimbabwe commemorates Anti-Sanctions Day. For one to in the running for the fabulous prizes, they have to record a video of themselves dancing like President Emmerson Mnangagwa to the song Ngazviende. One has to post the video on their personal Twitter account and tag Zanu PF’s handle @ZANUPF_Official.
#Ngazviende Dance Challenge
Replicate these sublime dance moves by The President @edmnangagwa and stand a chance to win fabulous prizes as we commemorate the Anti-Sanctions Day.
Record yourself dancing to Ngazviende and post on your handle and tag @ZANUPF_Official pic.twitter.com/cJTVsy4wRX
— ZANU PF #SanctionsMustFall (@ZANUPF_Official) October 19, 2020
Apart from the Ngazviende Dance Challenge, Zanu PF will hold an e-gala in Bulawayo, in line with Covid-19 regulations to commemorate the Anti-Sanctions Day. Zanu PF acting Secretary for Information and Publicity Patrick Chinamasa said the gala will be hosted virtually and Zimbabweans can follow the proceedings on television, social media, and radio
Musicians such as Sandra Ndebele, award-winning musician Jeys Marabini, Senior Lecturer Nicholas Zakaria, Soul Jah Love, and Sulumani Chimbetu are expected to perform.
Anti-Sanctions DayNgazviende Dance ChallengeZANU PF